छाउपडी प्रथाप्रतिको भोगाई र विचार « Anumodan National Daily
छाउपडी प्रथाप्रतिको भोगाई र विचार
सुदूरपश्चिममा महिनावारी हुनुलाई छाउ हुनु भनिन्छ । छाउ हुनु भनेको रजस्वला हुनु वा मासिक रक्तस्राव भएका बेला गर्न नहुने, खान नहुने र छुन नहुने भनेर मान्दै आएको परम्परा हो । म १३ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक महिनावारी हुँदा के गर्नु पर्छ ?, कहाँ बस्नुपर्छ ? भन्ने मैले बुझ्ने मौका पाइसकेकी थिए । किनकि मेरी आमाले महिनावारी हुँदा भोगिरहनु भएको भोगाइमा म प्रत्यक्ष सहभोगी थिए । आमा महिनावारी हुँदा भित्र कोठामा सुत्नु हुँदैनथ्यो । चार दिनसम्म बाहिर नै सुत्नु हुन्थ्यो । पानीको धारा छुन पाउनु हुन्नथ्यो । जति चिसो होस् वा गर्मी आफूले नुहाउने र ओढेका ओछ्याएका सबै थांगना धुनु पर्दथ्यो । छाउ भएका बेला पानी बोकेर आमाका लागि भाडामा पानी खन्याइदिनु पथ्र्यो । हामी आमासँग सुत्न पाउँदैनथ्यौं । सुतिहाले पनि बिहानै नुहाउनु पथ्र्यो ।
छाउ भएका बेला आमा गोरस (दूध, दही, मोही) केही पनि छुन पाउनु हुन्नथ्यो । तर गाई, गोरु चराउने, गाईगोरुको मल बोक्ने, दाउरा बोक्ने सबै काम गर्नुहुन्थ्यो । फलेका बोटविरुवा छोयो भने फलमा किरा लाग्छ, कुहिन्छ भन्नुहुन्थ्यो । छाउको लसपस भयो भने देवीदेउता रिसाउँछन्, पुरुषलाई छुन हुँदैन, छोयो भने राम्रो हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो । छाउ भएका बेला आमाले जाडोमा रातभरी नसुती काट्नु हुन्थ्यो । ती दिनरात निकै कष्टकर महसुस हुन्थ्यो । एकातिर आमालाई जाडो, गर्मी, वर्षातको पीडा, अर्कातिर म थाहा पाउने भएदेखि (सात वर्षको उमेरदेखि) खाने, खेल्ने बेलामा पुरै परिवारलाई काँचोपाको खाना पकाउने र खुवाउने, भाडा धुने भान्सा पोत्ने लगायतका आमाले गर्ने काम मैले सकिनसकि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । म सोच्दथे– आमाले भोग्नु भएको भोगाई मैले भोग्नु नपरोस् । बाहिर एक्लै रातमा, जाडो, गर्मीमा कसरी सुत्ने होला ? सर्प, लामखुट्टे, गुण्डाको चुनौति सम्झेर चिन्तित हुन्थे ।
विद्यालयमा पढ्दा ‘महिनावारी महिलामा किशोरावस्थादेखि वयश्क अवस्थासम्म देखिने नियमित प्रक्रिया हो, यो पाप होइन’ भन्ने जानकारी पाएपछि मलाई पनि वास्तविकता जान्न मन लाग्यो । मनमनै सोचे– मैले महिनावारी भए भनेर नभने के होला ? मनसँग सोधें– छाउ भए कसैलाई भन्दिन, आमाले भने झै लक्षण देखिन थाले भने बारौला । यदि कुनै लक्षण देखिएनन् भने मैले पढेको कुरा नै साचों हो । यो पाप नभएर धर्म ठान्ने भए भनेर परीक्षण गरे । कसैलाई केही भएन । कोही देविदेउता रिसाउनु भएन । गोरसपात छुँदा, खाँदा, बोटविरुवा छुँदा छाउको बेला बार्दा वा नबार्दा केही फरक पाइन । अनि मैले अबदेखि छाउ भए भनेर कसैलाई पनि नभन्ने निधो गरे ।
महिना, छ महिना, वर्ष बित्दै गर्दा मेरो उमेर पनि बढ्न थाल्यो । म १५ वर्षकी भए । अब प्रश्न उठ्न थाल्यो– मेरो शारीरिक क्षमतामाथि । घरमा आमा, काकी, भाउजू, फुपु आदि जम्मा भएका बेला भन्न थाल्नुभयो– ‘यो (बिमला) त छाउ हुन्न की क्या हो । यससँग कसले विहा गर्ला । यो त अधुरी हो कि क्या हो, चेकजाँच गर्नुपर्‍यो ।’ उहाँहरूको कुरा सुन्दा म पनि फन्दामा परेको महसुस भयो र आफूले छाउ लुकाएर समस्या समाधान हुने रहेनछ भन्ने लाग्यो । म पनि सध्ये नै छु । म पनि आमा हुन योग्य छु भन्नका लागि मैले पनि महिनावारी बार्नै पर्ने भयो । मैले आमा भाउजूलाई महिनावारी भएको जानकारी गराए । र, मैले पनि आमाले भोगेअनुसार नै कष्ट भोग्न थाले । आमा अशिक्षित भएकाले पनि ‘यो भगवानले बनाएको नियम हो, सबैले मान्नुपर्छ’ भनेर सम्झाउनु हुन्थ्यो ।
आमाले भन्नुभएको कुरा र विद्यालयमा पढेको कुरामा फरक पर्न गयो । वास्तवमा कुन तथ्य हो भनेर परीक्षण गर्न थाले । ‘महिनावारी भएका बेला फलेको बोट छुन हुँदैन, छोए कुहिन्छ । पुरुषलाई छोए विद्या घट्छ । गोरसपात खाए वा छोए गाईभैसीं बिरामी हुन्छन् । घरभित्र वा बाहिर लसपस भए देविदेउता रिसाउँछन्, बाघभालु लाग्छन् । धामीलाई छोए काप्छन्’ आदिइत्यादि सुने जति सबै एकपछि अर्को गर्दै परीक्षण गर्दै गए । र, म यस्तो निष्कर्षमा पुगे– फलफूलका बोट छोएमा फल कुहिने नभई रोग लागेका रुख छोए पनि अथवा नछोए पनि फल कुहिन्छन् नै । बुद्धि भएका दाइभाइ वा कोही पनि पुरुषलाई छोएमा पनि बाचेकै छन् । डाक्टर, इन्जिनियर आदि बनेकै छन् । मान्छेको बुद्धि घट्दैन, बरु महिलाका समस्या बुझ्नेले भेद्भाव हुन दिँदैनन् । गोरसपात छुँदा वा खाँदा गाईभैसीें बिरामी हुँदैनन्, बरु महिला महिनावारी भएका बेला पशुले स्याहार नपाउँदा वा रोग लाग्दा बिरामी हुन्छन् । घरभित्र बाघभालु लाग्ने होइन्, बरु बन छेउमा घर भएमा बाघभालु लाग्छन् । देउते मान्छेले महिनावारी भएको थाहा पाएमा मात्रै काप्छन्, किनकि यो मनको रोग हो ।
वनको बाघले खाए पनि वा नखाए पनि मनको बाघले खान्छ । छाउपडी मान्ने तपाईहामीलाई थाहा पाए मनको डरत्रासले काप्ने रोग सिर्जना हुन्छ । थाहा नपाए केही हुँदैन । वनको देउताले खाए पनि नखाए पनि मनको देउताले खाएको छ । शदियौंदेखि थारू जातिले छाउपडी मानेका छैनन्, तर केही भएको छैन । मेरो घरमा छाउप्रथा बन्द भइसकेको छ । घरमा म छाउ भएकी छु भनिरहनु पर्दैन । सकेको काम गर्छु । परिवारको सहयोग लिन्छु । गोरसपात झन् धेरै खान्छु । सरसफाइमा बढी ध्यान दिन्छु । छाउ भएकाबेला महिलाले यो खान हुँदैन, त्यो खान हुँदैन भन्ने समाजले बनाएको चलन हो । यो चलन अहिलेको आधुनिक समाजमा गलत साबित भइसकेको छ । किनभने यसै प्रथाका कारण कैयौ चेली असुरक्षित बसाइका कारण बाघको आक्रमणमा परेका छन् । साँपले टोकेको छ । कठ्यांग्रिएर अकालमा ज्यान गुमाएका छन् । बलात्कृत भएका छन् । महिनावारी भएका बेला असुरक्षित बसाइका कारण महिलाले यति धेरै दु:खकष्ट भोग्दा पनि अझैं पनि यसलाई सामाजिक चलन भनेर कायमै राख्नु कति उचित हो ?
तपाईहामीले भोग्दै वा देख्दै आएको महिनावारी चक्रबिना मान्छेको जन्मको कल्पना नै हुँदैन । महिलाको अण्डकोष निषेचन हुन नपाएर खेर जाने प्रक्रिया हो भने महिलाको अण्डकोष र पुरुष शुक्रकिट निषेचित भई महिलाद्वारा सन्तानको जन्म हुने हो । । हो, महिनावारी भएका बेला योनीबाट खराव रगत बग्दछ । योनी निकै संवेदनशील अंग हो । योनीमा फोहर भएमा रोगको संक्रमण हुने बढी सम्भावना हुने भएकाले सरसफाईमा निकै ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । महिनावारी भएका बेला कतिपय महिलामा अत्याधिक पेट दुख्ने, बान्ता हुने लक्षण पनि देखिने भएकाले विषेश ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । चारपाँच दिनसम्म नियमित रूपमा रक्तस्राव हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा विषेश सरसफाईका साथै पोषिलो खाना तथा आरामको आवश्यकता पर्दछ । छाउबारे तथ्यसत्य कुरालाई आधार मानेको खण्डमा यसप्रतिको गलत सोचलाई हटाउन सकिन्छ । महिनावारी प्राकृतिक शारीरिक प्रक्रिया भएकाले कुविचार सहित मनको डर हटाउन आवश्यक छ ।
हाम्रो समाजमा अहिले पनि महिनावारीको वास्तविकता एकातिर हुँदाहुँदै पनि धर्मका नाममा विद्यमान कुसंस्कार, गलत सोचको अन्त्य हुनुपर्दछ । महिनावारीको प्रसंगमा ऋषिपञ्चमीको चर्चा आवश्यक हुन्छ । हिन्दू धर्मावलम्बीमा वर्षभरी छाउ भएका बेला जानिनजानी भएको पाप पखाल्न वर्षमा एकदिन ३६५ पटक स्नान, ३६५ पटक दन्तमन्जन ३६५ पटक… आदि कर्म गरेर चोखो लुगा लगाएर पूजाआजा गर्ने प्रचलन चलिआएको छ । वर्ष भरि ३६५ दिन हुन्छन्, तर महिला एक महिनामा चारपाँच दिन मात्र रजस्वला हुन्छन् । त्यसैले ३६५ दिनमा भएको पाप एक दिनमा पखाल्ने भन्ने सोच नै गलत छ । धर्म संस्कारले महिनावारीलाई त्यसबेलाको समयकाल परिस्थिति अनुरूप व्याख्या गरिए पनि अहिलेको समयमा त्यो संस्कार गलत सावित भइसकेको छ । गलत कुरा कहिल्यै पनि धर्म हुन सक्दैन । त्यसैले छाउपडी प्रथा गलत छ । ऋषिपञ्चमीको व्रतका नाममा वर्षभरि छाउ भएका बेला जानीनजानी भएको पाप पखाल्ने कुरा नै नै गलत संस्कार हो ।